Medical Writings: Comments Anal practice
အလွန်ကိုဗဟုသုတရစေပါတယ် တလွဲသုံးတာတွေ ထင်နေတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာ DTS ရှင်းပြတာ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်တယ်... ဒါတောင် မကြောက်ဘဲ နေလို့ကတော့ လူကြားသူကြားထဲ အီးတန်းလန်းနဲ့ နေကြပေါ့။ ဒီဆောင်းပါးကို သူငယ်ချင်းတွေဆီ Mailအဖြစ် ကူးပြီး ပို့ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ဆရာ။ ကျေဇူးလည်း အများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို ပညာတော့
တတ်ပါရဲ့၊Sex အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် သိပ်အားနည်းခဲ့ပါတယ်။ လင်သားကိုမညိုညင်စေတဲ့စိတ်နဲ့သာ လိုက်လျောခဲ့မိတာ။ အခုဒီစာဖတ်ရတော့ ရှက်လည်းရှက်တယ်။ အသိနောက်ကျခဲ့တာကိုလည်း နောင်တရတယ်။ အမှန်ဝန်ခံရရင်လုံးဝမနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒီပိုစ်ကို သတိတရားရှိတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေကို ဖတ်စေချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်တော့ သူများကိုမချစ်နှိင်ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီး၊ပညာတတ်ရဲ့သာနဲ့
နှိင်ငံရပ်ခြားလာတဲ့ အပြားကားတွေကိုကြည့်ပြီး၊ စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်ရှိယောက်ျားသားတွေကို အားလုံးကို ကျွန်မတို့ တော်လှန်ရမယ်။
September 25, 2009 3:24 PM
Thank you so much for this information. It is very important for everyone. Please let me forward this post to my friends.
တကယ်တော့ sexual intercourse ရဲ့ function ဆိုတာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့ပါ။ လူဆိုတော့ အသိဥာဏ်ကမြင့်တော့ ခက်တော့ အခက်သား။ တစ်ပုံစံတည်းကြီးနေရတာ မကြိုက်ကြလို့ လက်တည့်စမ်းကြရင်း ဒီ sodomy လို့ခေါ်တဲ့ anal intercourse က စလာတယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် အရှေ့တိုင်းမှာ ဒီကိစ္စက သိပ်ပြိး မကျယ်ပြန့်လှပါဘူး။ အနောက်တိုင်း အပြာကားတွေရဲ့ cultural invasion ရဲ့ မကောင်းတဲ့ရလဒ်ပေါ့။
ဆရာတင့်ဆွေ ပြောသလို အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှသာ ဖတ်မယ်ဆိုရင် အသက်ကန့်သတ်ချက်က မများလွန်းဘူးလားလို့။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ကလေး ၂ယောက်လောက် ရှိတည့်သူတွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဒီ abnormal intercourse တွေရဲ့ health impact တွေကို high school level မှာ ကတည်းက ကလေးတွေကို ပညာပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် oral sex ရဲ့ မကောင်းတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ရေးပေးပါအုံး။ အခုလို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ post လေးကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အင်မတန် ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါဆရာ စအိုကနေ ဆက်ဆံတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိပေမဲ့ သဘာဝ နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာမို့ လုံးဝကို လက်မခံနိူင်ပါဘူး ခုလိုဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုသဘောကျ ကျေနပ် သွားခဲ့ပါတယ်...အဲလိုသိသင့်တဲ့ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ဆရာ...:)